Puntland: Natiijada Imtixaanka Dugsiga Sare oo la shaaciyay
GAROOWE, Puntland- Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa maanta shaacisay natiijada Imtixaanka Dugsigayada sare oo ay wasaaraddu qaatay horaantii bishii May ee sannadkan.
Xaflad ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa lagu shaaciyay natiijada Ardaydu ka keeneen imtixaanka, waxaana weheliyay magacyada 10 Arday ee galay kaalimaha sar sare.
Agaasimaha Waaxda Imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Puntland Axmed Maxamuud Warsame oo ka hadlayay marxaladihii uu soo maray imtixaanku ayaa sheegay in sixitaankiisa kaliya uu qaatay muddo bil ah loona xilsaaray macalimiin iyo khubaro aqoon durugsan u leh howshaas.
Wuxuu xusay in lagu bixiyay waqti iyo juhdi badan si Arday walba sidii arday walba u helo caddaalad ku salaysan aqoontiisa.
Wasiirka Wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare Abshir Yuusuf Aw-ciise ayaa hambalyo u diray dhammaan arday ku baastay Imtixaanka, wuxuuna ugu baaqay inay sii wadaan waxbarashadooda.
Yuusuf ayaa sidoo kale xusay in wasaaraddu mar kasta u taagantahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd tacliinta Ardayda, si bulshadu u gaarto hormar.
Dhinaca kale wasiirka ayaa goobta ka akhriyay magacyada Tobanka Arday ee galay kaalimaha sare iyo Iskuulaadka ay ka tirsanaayeen.
In kabadan 15kun oo Arday ayaa sannadkan u fariisatay Imtixaankii laga qaaday Ardayda dhigata Dugsiyada sare iyo hoose ee Puntland.
Xubno katirsan Jaamacadda EAU oo safar ku tagay Malaysia
Puntland 12.12.2017. 09:02
Xubno ka tirsan Jaamacadda Bariga Afrika oo ka kooban Guddoomiye Kuxigeenka ..
Puntland: Rag laga shakisanyahay oo Garoowe lagu qabtay
Puntland 20.02.2018. 19:03
Madaxweynaha Puntland oo Garowe ku laabtay
Puntland 09.12.2017. 23:21